China Emamectin Benzoate orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Lemandou
Bibikely famonoana poizina mikraoba, famonoana olona. Bibikely famonoana bibikely mahomby mifototra amin'ny avermectin, ny tombony dia ny fiasa avo lenta, ny bibikely famonoana bibikely, vokany mandritra ny fotoana lava, sns. Ao amin'ny vavony no tena anaovany izany. Ny mekanisma famonoana bibikely dia manakana ny fiasan'ny hozatry ny bibikely.
sahy miteny B1≥70,0%
Fahaverezan'ny maina (%) ≤2.0%
Bika Aman 'endrika Vovoka mavomavo fotsy na maivana
Bibikely famonoana bibikely antibiotika, fahombiazana avo lenta, poizina ambany, tsy misy sisa.
Tsy misy manimba ireo bibikely mahasoa amin'ny fizotry ny fifehezana ny bibikely
Ampiasaina betsaka amin'ny legioma, voankazo, landihazo ary voly hafa amin'ny fifehezana bibikely isan-karazany. Azo afangaro amin'ny ankamaroan'ny bibikely
Inona no fampiasana ny emamectin benzoate?
Ny abamectin dia ampiasaina voalohany hifehezana ny mites, ary ny emamectin benzoate dia ampiasaina hifehezana ireo karazana lepidopterian amin'ny legioma, landihazo ary paraky. Ivermectin dia ampiasaina ho toy ny anthelmintic amin'ny fitsaboana aretina amin'ny tsiranoka amin'ny tsinay, ny fahajamban'ny renirano (onchocerciasis) ary ny filariasis amin'ny lymphatic.
Abamectin dia misy poizina amin'ny vavony ary misy vokany eo amin'ny bibikely sy bibikely ny famonoana olona, ​​ary tsy mahafaty atody. Ny fomba fiasa dia tsy mitovy amin'ny bibikely ankapobeny satria manelingelina ny hetsika neurophysiolojika ary manentana ny famoahana ny asidra gamma-aminobutyric, izay misy fiatraikany amin'ny famindrana nerveuse ny arthropods. Ny olon-dehibe, nymph ary ny olitra bibikely an'ny bibikely dia hiseho malemy aorian'ny fifandraisany amin'ny abamectin, tsy mihetsika na mamahana, ary maty aorian'ny 2 ka hatramin'ny 4 andro. Abamectin dia misy vokany mahafaty kokoa noho izy io satria tsy miteraka tsy fahampian-drano haingana amin'ny bibikely. Na dia misy ifandraisany mivantana sy famonoana olona aza ny avermectin amin'ny bibikely mpihaza sy ny fahavalo voajanahary parasito, dia tsy manimba kely ny bibikely mahasoa izany satria vitsy ny sisa tavela amin'ny velaran'ny zavamaniry. Ny abamectin dia tototry ny tany ary tsy hihetsika, ary simba ny zavamiaina bitika, noho izany dia tsy misy vokany eo amin'ny tontolo iainana ary azo ampiasaina ho singa iray amin'ny fifehezana feno. Mora ny manomana, manondraka ny fikarakarana anaty rano ary mampihetsika azy hampiasaina, ary azo antoka kokoa ho an'ny vokatra izany.